Publiée par reepicheep — Le 23 août 2017
Lehilahy roa tokony eo amin'ny 53 sy 27 taona eo ho eo no nahatratrarana basy lava iray sy bala iray cartouche teo amin'ny fiantsonana mankany atsimo na hoe fasan'ny karàna.
Nanao fisafoana toy ny fanao mahazatra azy teny ami’ny faritra Anosizato sy ny manodidina iny ireo polisy avy ao amin’ny kaomisaria Boriborintany faha-5 etsy Mahasina ka nahatsikaritra olona 3 toa mahimahina teo Ankadimbahoaka. Nandray andraikitra avy hatrany ireo mpitandro filaminana ka nanao ny fanarahan-dia ireto olona ireto hatrany amin’ny tobin’ny taxi-brousse eny amin’ny fasan’ny Karàna. Sarona teny an-toerana ny roa lahy fa ny iray kosa tafaporitsaka. Rehefa nosavaina ny sakaosy nentin’izy ireo dia nahitana ireo fitaovam-piadiana.